Sidee ayey u muuqanaysaa SHAXDA ay garoonka ku soo geli doonto kooxda Liverpool kulanka ay la leedahay Arsenal? – Gool FM
Macalin Ole Gunnar Solskjær oo ka hadlay sababta ay Man United uga hartay heshiiska Erling Håland
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Man United Iyo Burnley ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Kooxda Arsenal oo loo sheegay qiimaha ay ku heli karto Layvin Kurzawa
Miyey Kooxda Bayern Munich doonaysaa inay si joogto ah ula wareegto Philippe Coutinho?
Muxuu ka socon la’yahay heshiiska ay Barcelona ku doonayso Pierre-Emerick Aubameyang?
KASHIFAAD: Maxay tahay sirta ku duugan qaabka uu rigooradda u tuuro Jorginho, muxuuse u boodaa ka hor tuurista kubadda gool ku laad kasta?
Man United oo ah kooxda ugu cad-cad raacdada loogu jiro mid ka mid ah xiddigaha khadka dhexe ee Juventus
Barcelona oo doonaysa inay Liverpool ka dulqaado bartimaameedkeedii ugu weynaa suuqa bishan Janaayo
Arsenal oo badalka Pierre-Emerick Aubameyang ka dhex arkootay Horyaalka Preimer League
Pep Guardiola oo si cad u sheegay rigoore tuuraha ugu wanaagsan Kooxdiisa Manchester City
Sidee ayey u muuqanaysaa SHAXDA ay garoonka ku soo geli doonto kooxda Liverpool kulanka ay la leedahay Arsenal?
Haaruun August 22, 2019
(Liverpool) 22 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa Sabtida marti-gelin doonta Naadiga Arsenal, iyadoo labada kooxood loo diiwaan geliyey rikoor guulo isxiga xilli ciyaareedkan cusub horyaalka Premier League.
Naadiga ka dhisan Merseyside-ka ayaa garaacday kooxaha Norwich City iyo Southampton labadii kulan ee ugu horreeyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, halka Gunners ay guulo ka gaartay kooxaha Newcastle United iyo Burnley.
Waa arrin u fiican labada kooxood ee Sabtida wada ciyaaraya Reds iyo Gunners, marka loo eego tartanka loogu jiro hanashada horyaalka Premier League, maadama akooxaha Manchester City, Tottenham Hotspur, Manchester United iyo Chelsea ay dhammaantood dhibco lumiyeen.
Liverpool waxaa ka dhaawacan oo kulankan seegi doona goolhaye Alisson oo kubka ka dhaawacan iyo Nathaniel Clyne oo qaba dhaawac dhanka jilibka ah, waxaana shaki la galinayaan Naby Keita oo dhaawac muruqa ah sheeganaya.
Haddaba shabakadda ciyaaraha ee Sports Mole ayaa shaacisay sida ay u muuqan karto shaxda ay kooxda Liverpool garoonka ku soo geli doonto kulanka ka dhacaya garoonka Anfield.
Zinedine Zidane oo Kooxda Real Madrid u sheegay in Neymar uu ka door-bidayo xiddig ka ciyaara horyaalka Premier League
Sidee ayey u muuqanaysaa SHAXDA ay garoonka ku soo geli doonto Kooxda Arsenal kulanka ay wajahayso Liverpool?